Body Lotion လိမျးတာ ခြှေးပေါကျပိတျသလား? – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဘျောဒီလိုးရှငျး Body Lotion ဆိုတာ ခန်ဓာကိုယျကို လိမျးပေးရတဲ့ အသားအလှဆီပါ ။ Skin care အသားအရထေိနျးသိမျးပေးတာ တဈမြိုးပေါ့ ။အသားအရလေိမျးဖို့လိုတဲ့ အကြိုးအကွောငျးတော့ ရှိပါတယျ ။နစေ့ဉျ အိမျထဲမှာပဲ နနေေ ၊အိမျအပွငျကိုပဲ ထှကျထှကျ နပေူဒဏျပဲဖွဈဖွဈ ၊လတေိုကျဒဏျပဲဖွဈဖွဈ ၊အဲယားကှနျးဖှငျ့လို့ ခံရတဲ့ အအေးဒဏျပဲဖွဈဖွဈ ၊ပတျဝနျးကငျြ ရာသီဥတု ဒဏျပဲဖွဈဖွဈ မိမိရဲ့ အသားအရကေသာ တိုကျရိုကျထိတှေ့ ရတာပါ ။အဲ့ဒီလို ပူလို့ပဲ ဖွဈဖွဈ ၊အေးလို့ပဲ ဖွဈဖွဈ ဒီအပူအအေးဓာတျတှဟော အရပွေားထဲ စိမျ့ဝငျပွီး အရပွေားရဲ့ကြုံ့နိုငျ ဆနျ့နိုငျတဲ့သတ်တိ Elasticity ကို ပကျြစီးစပေါတယျ ။
ထို့ကဲ့သို့ Elasticity ပကျြစီးလာရငျ အသားအရတှေေ လြော့တှဲလာမယျ ။အသားရတှေေ ခွောကျသှလေ့ာပွီး အရှယျမတိုငျခငျ အရေးအကွောငျးတှေ ပျေါလာမယျ ။ဒါကွောငျ့ပဲ ကွိုတငျကာကှယျတဲ့အနနေဲ့ ဘျောဒီလိုးရှငျး Body Lotion ကိုလိမျးရတာပေါ့ ။
သတိထားရမှာက အရမျးအထူအပဈြကွီး မလိမျးမိစနေဲ့ပေါ့ ။အရမျးထူပဈြတာမြိုးကို လိမျးမိရငျ ခြှေးပေါကျတှေ ပိတျနိုငျတာပေါ့ ။ဘျောဒီလိုးရှငျး Body Lotion အနတေျောလိမျးတာကတော့ ပြိုမတေို့အတှကျ ခြှေးပေါကျလညျးမပိတျစဘေူး ။အသားအရလေညျး လှမယျ ။နောကျတဈခု သတိခွပျရမှာက မိတျကပျအထူစားတှေ ၊သနပျခါး ထူထူတှေ လိမျးထားရငျ မလိုအပျတော့တဲ့ အခြိနျမှာ ကုနျစငျအောငျ မဖကျြရငျ အသားအရကွေားထဲ ကနျြခဲ့ပွီး ခြှေးပေါကျကလေးတှပေိတျနိုငျတယျ ။ဒါကွောငျ့ ညအိပျခါနီး မကျြနှာကိုပဲဖွဈဖွဈ ၊ခန်ဓာကိုယျကိုပဲဖွဈဖွဈ ခြှေးပေါကျမပိတျခငျြရငျ လိမျးထားတဲ့ အလှကုနျတှေ အကုနျဖကျြပွီး အသားအလှဆီ ဘျောဒီလိုးရှငျးကို လိုအပျတဲ့နရောတှကေိုပဲ ခပျပါးပါးလေးနဲ့ သာသာလေးသာ လိမျးသငျ့တယျ ။
ဘော်ဒီလိုးရှင်း Body Lotion လိမ်းတာ ချွေးပေါက်ပိတ်သလား?
ဘော်ဒီလိုးရှင်း Body Lotion ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ကို လိမ်းပေးရတဲ့ အသားအလှဆီပါ ။ Skin care အသားအရေထိန်းသိမ်းပေးတာ တစ်မျိုးပေါ့ ။အသားအရေလိမ်းဖို့လိုတဲ့ အကျိုးအကြောင်းတော့ ရှိပါတယ် ။နေ့စဉ် အိမ်ထဲမှာပဲ နေနေ ၊အိမ်အပြင်ကိုပဲ ထွက်ထွက် နေပူဒဏ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊လေတိုက်ဒဏ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊အဲယားကွန်းဖွင့်လို့ ခံရတဲ့ အအေးဒဏ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ပတ်ဝန်းကျင် ရာသီဥတု ဒဏ်ပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိရဲ့ အသားအရေကသာ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ ရတာပါ ။အဲ့ဒီလို ပူလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊အေးလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီအပူအအေးဓာတ်တွေဟာ အရေပြားထဲ စိမ့်ဝင်ပြီး အရေပြားရဲ့ကျုံ့နိုင် ဆန့်နိုင်တဲ့သတ္တိ Elasticity ကို ပျက်စီးစေပါတယ် ။
ထို့ကဲ့သို့ Elasticity ပျက်စီးလာရင် အသားအရေတွေ လျော့တွဲလာမယ် ။အသားရေတွေ ခြောက်သွေ့လာပြီး အရွယ်မတိုင်ခင် အရေးအကြောင်းတွေ ပေါ်လာမယ် ။ဒါကြောင့်ပဲ ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ဘော်ဒီလိုးရှင်း Body Lotion ကိုလ်ိမ်းရတာပေါ့  ။
သတိထားရမှာက အရမ်းအထူအပျစ်ကြီး မလိမ်းမိစေနဲ့ပေါ့ ။အရမ်းထူပျစ်တာမျိုးကို လိမ်းမိရင် ချွေးပေါက်တွေ ပိတ်နိုင်တာပေါ့ ။ဘော်ဒီလိုးရှင်း Body Lotion အနေတော်လိမ်းတာကတော့ ပျိုမေတို့အတွက် ချွေးပေါက်လည်းမပိ်တ်စေဘူး ။အသားအရေလည်း လှမယ် ။နောက်တစ်ခု သတ်ိခြပ်ရမှာက မိတ်ကပ်အထူစားတွေ ၊သနပ်ခါး ထူထူတွေ လိမ်းထားရင် မလိုအပ်တော့တဲ့ အချိန်မှာ ကုန်စင်အောင် မဖျက်ရင် အသားအရေကြားထဲ ကျန်ခဲ့ပြီး ချွေးပေါက်ကလေးတွေပိတ်နိုင်တယ် ။ဒါကြောင့် ညအိပ်ခါနီး မျက်နှာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ခန္ဓာကိုယ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ချွေးပေါက်မပိတ်ချင်ရင် လိမ်းထားတဲ့ အလှကုန်တွေ အကုန်ဖျက်ပြီး အသားအလှဆီ ဘော်ဒီလိုးရှင်းကို လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုပဲ ခပ်ပါးပါးလေးနဲ့ သာသာလေးသာ လိမ်းသင့်တယ် ။